Daruuraha Is-fahan Siyaasadeed Ee Geeska Afrika |
Bashir Maxamed — March 12, 2019
Sawirka waxaa sameeysay TukeSomalism
Waa hubanti la’aan in aynu il-gaara ku eegayno daruuraha is-fahan siyaasadeed ee waddamada Geeska Afrika, oo isbedel iyo is-fahan kasta oo dhaca raad innagu yeelanayo ka bulsho ahaan. Si kooban haddaan u iftiimiyo ujeedada qormada cinwaankeedu kor ku xusan yahay; waa mid aan doonaayo inaan ogaalka bulshada kor ugu qaado. Maqaalkan waxa aan idinku la wadaagi doonaa aragti caam ahaan loo fahansanaan karo oo aan ka soo dheeganayno isbedelada siyaasadeed ee geeska afrika ka cartamaya xilligan, mareegaha falanqeeya arrimaha mandaqada khaas ahaan iyo falanqeeyayaasha arrimaha siyaasadda. Waxa aan akhristaha ugu afeef dhiganayaa inaan qormadan ku hadlayo aragti iyo dareen ku salaysan afkaarta bulshada ee guud, aanse abla-ablaynyo inta aad taqaanaan iyo in ka badanba.
Halka Uu K Soo Hayaamay Isbedelka Geeska Afrika
Geeska afrika waxaa ka dhisan dowlado maamul ahaan taag daran, dhaqaale ahaan iyo awood ahaana liita. Waxaa saameyn ku leh Muran-xuduudeedka (Border dispute), argagixisda (Terrorism), musuqmaasuqa (corruption), isirka(Race), tahriibta (Migration), iyo dirqinta Aadamaha (Human trafficking). Muskiladaha gudaha, xuduudaha iyo hanaanka maamul xumo ee muddo soo taxnaa ayaa si u saameeyey dhinacyada siyaasadda (political), dhaqaalaha (economic), deganaanta bulshada (social satability).
Xaallada ugu weyn ee ay la deriska yihiin ayaa ah degganaansho la’aan gudaha ah (internal instability) iyo taag darri dowladnimo oo aanay iska cabin karin saamaynta dibadda mid siyaasadeed iyo dhaqaale ba.
Fooraha iyo duufaanada siyaasadeed ee gobolkani ayaa ah kuwo ku socda xawaare sare, isbedeladii ugu faca waaweynaa abid ayaa waddamada geeska ka dhacaya. Isbedelka siyaasadeed ee ka dhacay Itoobiya ayaa sababay in wadamo badan oo sanado badan colaadi dhextaalay in ay kulamo foolka fool ah (face to face conference) wada yeeshaan, tusaale ahaan Itoobiya Vs Eratriya.
Kulamada ayaa lagu gorfeeyay sidii dhidibada loogu taagi lahaa , isdhexgel dhaqaale, ganacsi, is-fahan diblomaasiyadeed, iskaashi iyo iskaashi goboleed cusub, kaasi oo isku soo dhaweeya waddamo hore ugu kala fogaaday siyaasad xumo uu sababay dagaalo sokeeyo, boob dhuleed iyo is-afgaran’waa siyaasadood oo soo kala dhex galay waddamada.
Wax qarsoon ma’aha danaha ay dowlado iyo shirkado shisheeye oo badan ka leeyihiin geeska, ha ahaato dhan dhaqaale, dhaqan iyo dhan siyaasadeedba. Geeska Afrika waa bogcad hodan ah, leh ilo waxsoosaar oo dihan ama si buuxda aan looga faa’idaysan, kuna yaal meel aad muhiim u ah isku-socodka badeecadda adduunka.
RW Abiy, Afrika cashar cusub ayuu baray, waxa uu la yimi siyaasad u eg in Maraykan gadhwadeen ka yahay oo ah wixii horeba quba. Si siyaasadda tan cusubi u fusho waxa uu isku dayayaa in uu wax walba dhanka kale ka rogo oo uu quluubaa-geddiyo. Wax wal oo state ku lahaa waxa uu yidhi suuqa ayaa la yeelanaya (Public Private Partantership).
Waxa kale oo uu sameeyay oo uu yidhi Jbahadaha ONLF, OLF, Ginbot 7 iyo mucaarid oo dhan waa lala heshiinayaa. Abiy intaas ba isaga oo sameeyey haddana manta Itoobiya maalin ay ka kala qaybsan tahay ma ay soomarin, maalin ay ka dhaqaale hoosaysaa ma soomarin, maalin ay ka khilaaf badan tahayna ma soomarin. Sababtuna waa in uu gudihii daayacay oo uu culayska saaray arrimo khaaraji ah.
Horumar dhaqaale, ganaacsi iyo id bulsheed
Waxa uu fudaydin doonaa isku socodka dadka iyo alaabaha.
Wuxuu geeska ku soo dabaali karaa xasilooni siyaasadeed iyo mid nabadgalyo.
Waxa uu sahli doonaa ladagaalanka kooxaha xagjirka ah, budhcad badeed iyo ururada lidiga ku ah jiritaanka mandaqada.
Waxa uu abuuri doonaa isbahaysi dhaqaale (economic alliance), ciidan (army allaince), siyaasi (Political allaince) iyo Mid diblomaasiyadeed.
Bilowga Gurashada Midhaha Isbedelka Geeska Afrika
Durba khilaafkii diblomaasiyadeed ee Kinya iyo Somalia waxa lagu xaliyay hanaan diblomaasiyadeed.
Isku socodka dhulka ee Itoobiya iyo Somaliland oo caadi si turxaan la’aana u bilowday kadib dhicistii Cabdi Ilay Madwaxwaynihii DDSI.
Diyaarada Duulimaadada ee Ethiopia Arilines ayaa duulimaad toos ah ka bilowday Muqdisho iyo Asmara.
Dekadii Asmara ee hore uga caaganayd Itoobiya ayaa hadda dib loo bilaabay in shixmadaha Dalka itoobiya laga soo dajiyo.
Dhibaatooyinka ka dhalan kara isdhexgalka waddamada geeska
Bilowga dagaal qoomiyadeed iyo mid diimeed.
Isku dhac cusub oo dhex mara waddamada geeska
Isku dheelitirnaan la’aan ganacsi
Itoobiya waxaa ka dhacay isbedel xoog leh, waxaa ka dhacay wax Miiam Abaham ugu yeedhay furfunaansho siyaas iyo dib u ahayn dhaqaale. Itoobiyadii Malas Sinawi waxa ay ka mid ahayd dhowr waddan oo Afrikaana sida Ruwanda iyo Uganda oo uu ka taliyo hal xsi ayna cajabisay shaqan siyaasadeedka iyo dhaqaalaha shiinuhu. Inkasta oo ay itoobiya muhiim u ahayd eer galbeedka haddana marna kuma aysan qanacsanayn aragtidooda ku wajahan shiinaha. Shiinuhu waxa uu gacanta ku hayaa saddexda mashruuc ee ugu weyn Itoobiya ee kala ah Biyo xidheenka Abay, ceelasha shidaalka iyo waddada xadiidka.
Eritrea waxa ay ka mid tahay dalalka farakutiriska ah ee la haysta isbedelada ka socda geeska Afrika. Waa dal inta laga qayliyay siyaasadiisa gudaha lagu metelay in uu la mid yahay Waqooyiga Kuuriya (North Korea). Laakiin sanadihii dambe, wuxuu ka faa’idaystay fursado diblomaasi ah oo uu ka helay Sucuudiga, Imaaraadka, iyo Maraykanka wuxuu kaga baxay go’doonkii saarnaa ee hubka iyo dhaqaalaha. Hadda waxa uu qeyb ka yahay qorshaha isdhexgalka dhaqaale (regional integration) ee geeska Afrika.
Isiyas Afawerki madaxwaynaha Eretariya waxa uu rabaa inuu ka faa’idaysto fursadani, oo uu ka soo kabto go’doonkii mudda saarnaa. Waxa kale oo uu rabaa inuu dekedihiisa oo ah kuwo u dhow marinka Baabul Mandab ka dheefsado, sidoo kale waxa uu dheelayaa shax kursi iyo talis badbaadis ah (Regime Survival).
Tags: Daruuraha Is-fahan Siyaasadeed Ee Geeska Afrika
Next post Aagabka Laga Helo Guri Soomaaliga
Previous post Dhiciska